အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို နဲ့ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။ - Hello Sayarwon
ဆီးချို လို့ဆိုလိုက်ရင် အားလုံးကို အတူတူပဲလို့ ယူဆတတ်ကြတာရှိသလို ဆီးချိုက နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ သိတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဆီးချိုကို အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို နဲ့ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
ဒီဆီးချိုတွေက အမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားသလို လက္ခဏာတွေရော ကုသမှုတွေမှာပါ ကွဲပြားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုနဲ့ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုတို့ကြားက ကွာခြားချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဆီးချိုဆိုတိုင်း အတူတူလား …….
ဆီးချိုလို့ အားလုံးကို ခြုံပြီး ပြောပေမယ့် ဆီးချိုမှာ အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို၊ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုဆိုပြီး အကြမ်းဖျဉ်း (၂) မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုရော အမျိုးအစား၂ ဆီးချိုရော နှစ်ခုစလုံးက သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ပုံမှန်ထက် မြင့်တက်နေတာပါ။ အကြောင်းကတော့ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို မထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။ နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုက အင်ဆူလင်ကို ကောင်းကောင်း အသုံးမပြုနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဒီလိုဆိုလို့ ဆီးချိုက အမျိုးအစား-၁ ရော အမျိုးအစား-၂ ရော အတူတူပဲလို့ ယူဆစရာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီဆီးချို အမျိုးအစားတွေက ရောဂါဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းခံတွေ မတူသလို ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေရော ကုသနည်းတွေပါ ကွာခြားနေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို နဲ့ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုတို့ကြားက ကွာခြားချက်
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို နဲ့ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုဘယ်လိုတွေ ကွာခြားနေလဲ……
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို – ခန္ဓာကိုယ်က ပန်ကရိယမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်တာကြောင့် အင်ဆူလင် မထုတ်နိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို – ခန္ဓာကိုယ်က အင်ဆူလင်ကို ကောင်းကောင်း အသုံးမချနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို – အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အခုချိန်ထိ တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူး။
အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို – ကိုယ်အလေးချိန် ရှိသင့်တာထက် များနေတာ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေက အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို – အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုမှာ လက္ခဏာတွေက ပိုပြီး မြန်မြန် ပြသပါတယ်။
အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို – အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို လက္ခဏာတွေက သိသိသာသာ မဟုတ်ဘဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြသတာကြောင့် သိရှိကုသဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို – အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုကို အင်ဆူလင် ထိုးပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိတဲ့ နည်းနဲ့ပဲ အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။
အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို – အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုမှာတော့ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိတဲ့နည်းက အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုထက် ပိုများပါတယ်။ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်း အင်ဆူလင် ထိုးပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ထိန်းညှိလို့ ရပါတယ်။
၂မျိုးလုံးမှာ ဆေးဝါးနဲ့ ကုသတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် စားသုံးတာတွေ လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို – လက်ရှိမှာ အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုအတွက် ကုသနည်း မရှိသေးပါဘူး။ လေ့လာသုတေသန ပြုမှုတွေတော့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို – အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချလို့ရသလို သေချာလေး ဂရုစိုက်ပြီး ကျန်းမာရေးလိုက်စားမယ်ဆိုရင် သက်တမ်းစေ့ ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်မှာပါ။
သိထားဖို့လိုမယ့် ဆီးချိုရောဂါ လက္ခဏာများ
ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား-၁ မှာရော အမျိုးအစား-၂ မှာပါ လက္ခဏာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
အခုပြောပြမယ့် လက္ခဏာတွေ ခံစားရမယ်ဆိုရင် အမျိုးအစား-၁ ဆီးချို ရှိနေတာပါ။ အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုက အသက်ငယ်ငယ်ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မယ်။ အားမရှိသလို ခံစားရမယ်
အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို ခံစားရတဲ့အခါ အခုလို လက္ခဏာလေးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အရင်က အသက် ၄၀အထက်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံပြောင်းလဲလာတာကြောင့် ၄၀အောက်တွေမှာလည်း ဖြစ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုနဲ့ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို က အခုလို ကွာခြားမှုလေးတွေ ရှိပါတယ်။
What’s the difference between type 1 and type2diabetes? https://www.lifelinescreening.com/health-education/diabetes/type-1-type-2-diabetes?sourcecd=WNAT003 Accessed Date 8 November 2021
differences between type 1 and type2diabetes https://www.diabetes.org.uk/diabetes-the-basics/differences-between-type-1-and-type-2-diabetes Accessed Date 8 November 2021